पुष्पराज अधिकारी: मोवाइल, फेसवुक, इमेल इन्टरनेट प्रयोग गर्नेले वुझ्नु पर्ने कुरा ।
सुचना प्रविधिसंग सम्वन्धित साधनहरुमा मोवाइल फोन, पत्र पत्रिका, इमेल इन्टरनेटको प्रयोग वढदै गएको छ । इन्टरनेटसंग सम्वन्धित सामाजिक सञ्जाल फेसवुक, ट्विीटरको प्रयोग नेपालमा अधिक भएको पाइन्छ । कतिपय अवस्थामा सकारात्मक सोच र भावनाका साथ माथि उल्लेखित साधन स्रोतको प्रयोग गर्दा पनि विभिन्न आरोपहरु आउने, लाल्छना लाग्ने, विविध झमेला भोग्नु पर्ने वाध्यता आइ पर्छ । तसर्थ समयमै सतर्क हुनु नै वुद्धिमानी ठहरीन्छ ।
इमेल–इन्टरनेट÷ फेसवुक प्रयोगकर्ताले जान्नु पर्ने
तपाइले आफ्नो नामको इमेल एकाउट खोल्नु भएको छ भने त्यसको पासवर्ड सुरक्षित गर्नुहोस । समय समयमा त्यसको पासवर्ड परिवर्तन गर्नुहोस । पासवर्डको राख्दा सके सम्म असामान्य वस्तुहरु राख्नुहोस ताकी अरुले त्यसको अन्दाज गर्ने सम्भावना कम होस । अरुलाई पासवर्ड भुलेर पनि नदिनुहोला । यदि यसो गरेको खण्डमा अरुले पनि त्यसलाई खोलेर त्यो एकाउण्ट मार्फत कुनै नराम्रो काम गरिदीन सक्छ । अन्ततः त्यसको जिम्मेवार तपाइनै हुनु पर्ने छ । हिजो आज अर्काको नामवाट इमेल एकाउण्ट तथा फेसवुक एकाउण्ट चलाएर वद्नाम गर्ने साइवर क्राइमको पनि व्यापक विगविगि छ । विचार गर्नुहोस तपाइले प्रयोग गर्ने इन्टरनेट एउटा आइपी नम्वरवाट सञ्चालन भएको हुन्छ जुन विश्वको जुनसुकै कुनमा गएर गरे पनि हेर्न मिल्छ । फलतः ढिलो चाँडो तपाइ पक्रिनु हुने छ । यसर्थ छद्म नामवाट कसैमाथि गाली, वेइज्जती गर्ने काम गर्नु दण्डनीय छ साथै जतिनै लुकेर गरे भने पनि त्यो सडकमा गएर चिच्याएर भनेको भन्दा कयौं गुणा वढी खुलम् खुल्ला हुनेछ । सडकमा कराउनेमाथि प्रमाण नजुटन सक्छ तर इमेल, इन्टरनेट या फ्याक्स, फोन प्रयोग गर्ने व्यक्ति सजिलै पक्रन्छ । यदी तपाइको इमेलमा कसैले नकारात्मक टिप्पणी पठाएको छ भने त्यो डिलीट नगर्नुहोला । र आफुले पठाएका इमेलपनि डिलिट नगरी जतनसाथ राख्नु होला के थाहा पछि के पर्न सक्छ के ? यस्तै फेसवुक चलाउनेहरुको त प्रायः गोप्य भन्ने नै खासै केही हुन्न । तर यसमा गोपनीयतानै हुन्न भन्न खोजिएको भने होइन । यसर्थ यसको पनि सकारात्म प्रयोग मात्र गर्नु पर्दछ ।
मोवाइल फोन प्रयोग कर्ताले जानीराख्नु पर्ने सात कुरा ।
मोवाइल नयाँ किन्नुहोस
मोवाइल फोनः सकेसम्म तपाइले प्रयोग गर्ने मोवाइल फोन -सेट_ आफैले खरिद गरेको, नयाँ वा विश्वाशिलो पसलवाट खरिद गरेको हुनु पर्दछ । त्यस सेटसंग सम्वन्धित सम्पूर्ण कागजपत्र पनि लिन भुल्नु हुदैन । मोवाइल खरीद गर्दा मेमोरीकार्ड, क्यामरा जस्ता कुरामा वढी ध्यान दिने चलन छ यसो गर्नु भन्द भन्दा पनि यसको ग्यारेन्टी, वारेन्टि, सेक्युरिटी सेटिङ र यस भित्र हुने अन्य फंसलनल कुरामा ध्यान जानकारी लिएर राम्रो खालको फोन सेट खरिद गर्नु पर्दछ राम्रो भन्नाले महंगो सेट भन्ने वुझाइ पनि गलत हो । -जस्तै कल रेर्कडिङ सिस्टम, मोवाइल ट्रयाकर, जिपिएस, कल डिटेल आदी आदी_ तपाइ कतै जाँदै हुनुहुन्छ र हतार भयो भन्दैमा जथाभावी पसलमा गएर मोवाइल किन्नु हुँदैन ।
पुरानो मोवाइल नकिन्नुहोस
सस्तोमा पाइयो, मन प¥यो भनेर तपाइले नचिनेको नजानेको मानिससंग कहिल्यै पनि पुरानो मोवाइल नकिन्नुहोस । किनकी त्यो चारीको पनि हुन सक्छ या कसैले कुनै अपराध जन्य काममा त्यो मोवाइल प्रयोग गरेर विक्रि गर्न खोजेको रहेछ र तपाइले मोवाइल किनेर आफ्नो सिमकार्ड प्रयोग गर्नुभयो भने तपाइ पक्कै प्रहरीको अनुसन्धानमा तानिनुहुनेछ त्यतिखेर तपाइको इज्जत, समय र धनको क्षति हुने छ । भला तपाइ निर्दोश हुनुहोला तर दुःख त पाउनु भयो नी । मोवाइलभित्र एक प्रकारका आन्तरिक आइ.एम.इ नम्वर हुन्छ । त्यो नम्वर तपाइले प्रयोग गर्ने सिमकार्डको नम्वर सहित सेवाप्रदायक कम्पनीको रेकर्डमा रजिष्टर भएको हुन्छ ।
सिमकार्ड आफ्नै नामको चलाउनुहोस
तपाइले प्रयोग गर्ने सिमकार्ड केवल तपाइलेमात्र प्रयोग गर्नुपर्छ । कुनै सर्त वा कसैलाई खुसी पार्न , प्रभावपार्न, माया पाउन आफ्नो नामको सिमकार्ड अरुलाई नदिनुहोला । यदि उसले तपाइको नामको सिमकार्डवाट कुनै अपराधजन्य कार्यगरेको खण्डमा पहिला तपाई फन्दामा पर्नुहुनेछ । उचित प्रमाण र तर्क दिन नसकेको खण्डमा त्यसको सजाय तपाइलेनै भोग्नु पर्ने हुन्छ । समय समयमा आफुले प्रयोग गरेको फोनको फोन डिटेल पनि लिने गर्नुहोस । फोन डिटेल अनिवार्य नभएपनि यसलाई ऐच्छिक आवश्यकताका रुपमा राख्न सकिन्छ ।
फोन अरुलाई नदिनुहोस्
केही अन्जान व्यक्तिले आफ्नो समस्या देखाएर तपाइलाई प्रभावित पारेर केहीवेरको लागि भनेर कसैले तपाइको फोन, मोवाइल फोन प्रयोग गर्न मागेमा नदिनुहोला ।
सुरक्षामा ध्यान दिनुहोस
तपाइको मोवाइल पर्सनल हो । त्यसैले यसमा तपाइका नितान्त व्यक्तिगत र गोपनीय सामाग्री पनि हुन सक्छन् त्यसैले फोन मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरीमा पनि सेक्युरीटि कोड राख्नुस साथै मोवाइल सेटमा पनि सेक्युरीटीकोड प्रयोग गर्नुहोस ताकी तपाइवाहेक अरुले त्यो सेट प्रयोग गर्न नसकोस । कतै ठूलो भिडभाड, वसमा यात्रा गर्दा या अन्य मानिसको चाप भएको स्थानमा आफ्नो मोवाइलफोनको सुरक्षा गर्नुहोस ।
आफ्नो मोवाइलमा मोवाइल ट्रयाकर छ भने उक्त फंसनको भरपूर प्रयोग गर्नुहोला । यदि कसैगरी तपाइको मोवाइल फोन हरायो र कसैले भेटेर आफ्नो सिमकार्ड राखेमा तुरुन्त यसले तपाइले निर्धारण गर्नु भएको नम्वरमा खवर जानेछ ।
अनैतिक कार्य नगर्नुहोस
आफ्नो मोवाइलवाट अनावश्यक कसैलाई फोन गर्ने डरधाक, धम्की देखाउने काम नगर्नुहोला, मिसकल गर्ने, टेक्स्ट वा मल्टिमीडीया एस.एम. एस गर्ने सताउने काम नगर्नुहोला । यसको पूर्ण विवरण सम्वन्धित कम्पनीसंग हुन्छ र कानुनी प्रकृयामा गएको खण्डमा प्रहरी मार्फत त्यो उपलब्ध हुने हुनाले तपाई अपराधी सावित हुनुहुनेछ ।